भोलिको क्याबिनेटमा वामदेव ! « Jana Aastha News Online
भोलिको क्याबिनेटमा वामदेव !
प्रकाशित मिति : २१ भाद्र २०७७, आईतवार २०:१९
गत फागुन १४ गते र यही भदौ १८ गतेको नेकपा सचिवालय बैठकका निर्णय सम्भवतः भोलि बस्ने क्याबिनेट बैठकमा एजेण्डा बन्ने सम्भावना बढेको छ ।
प्रधानमन्त्री जसरी पनि खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको काम हेर्न मिल्ने गरी जिम्मेवारी टाँसो लगाउने पक्षमा देखिनुभएको छ । तर, हिजोदेखि झण्डाबिना उनको चाहना बालुवाटारमाभन्दा सात समुन्द्रपारिको जिम्मेवारीतिर ढल्किएको बताइन्छ ।
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट रातारात हात धुन बाध्य बनाउनेमा बालुवाटार किचेन क्याबिनेटका प्रभावशाली तीनजना कमरेडहरूको हात रहेको आफ्नो अनौपचारिक अभिव्यक्ति सान्त्वना दिएका निकटस्थले नै बालुवाटार पुर्याएपछि खतिवडाले मनस्थिति बदलेको आँकलन गरिएको छ ।